admin – Page 30 – Kachin
နိုင်ငံတော်မှ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ရာတွင် အမှန်တကယ်ရသင့်ရထိုက်သည့် အိမ်ထောင်စုများအနေဖြင့် သတ်မှတ် ထောက်ပံ့ငွေအတိုင်း မရရှိပါက ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအတွက်
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲများကို COVID-19 လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ကန့်သတ်ကျင်းပနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး
မြစ်ကြီးနား နိုဝင်ဘာ ၁၉ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ ရိပ်သာများတွင် ကထိန်ကာလအတွင်း၌ ကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲများကို ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မှာကြားချက်များနှင့်အညီ အကန့်အသတ်ဖြင့် ပြုလုပ်ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်လူမှုဝန်ကြီး ဦးနေဝင်းနှင့် ပြည်နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပြီး ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ ရိပ်သာ များတွင် ကထိန်ကာလအတွင်း၌သာ ဆောင်ရွက်ရသည့် ကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲများကို သံဃာတော်၊ လူပုဂ္ဂိုလ် (၃၀)ဦးထက်မပိုသော မိသားစုကထိန်အနေဖြင့် ကျင်းပဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ ဧည့် ပရိသတ်များ ဖိတ်ကြားခြင်းမပြုဘဲ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မှာကြားချက်များနှင့်အညီ ပြုလုပ်နိုင်ရေးဆွေး နွေးကြသည်။ထို့အပြင် ဌာနဆိုင်ရာများအနေဖြင့် ကထိန်ပဒေသာပင်များကို မိမိတို့အစီအစဉ်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများသို့ ကြိုတင်ပို့ဆောင်ထားကြရေး၊ မိသားစုအလိုက် […]ဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်
ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် နောင်နန်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်
မြစ်ကြီးနား နိုဝင်ဘာ ၂၁ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာခက်အောင်သည် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်အဆင့် ဌာနတာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ နောင်နန်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရပ်မိ၊ ရပ်ဖများ၊ ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ကွင်း ဆင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ကြသည်။ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်သည် မြစ်ကြီးနားမြို့၊ စီတာပူ (သီတာအေး)ရပ်ကွက်အတွင်း ရေဝပ်သည့် တက္ကသိုလ်ပတ်လမ်း အရှည်ပေ ၁၅၀၀ လမ်းအား ကတ္တရာလမ်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်ပေးခဲ့ပြီး အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းရှိ စက်မှုဇုံအပိုင်း ခါနာမ်ရွာလယ် လမ်းမ ပေ ၁၉၇၀ နှင့် လမ်းမ ကြီးမှ တစ်ဆင့် ဗလမင်းထင်ပရိယတ္တိစာသင်ကျောင်းသွားလမ်း ပေ ၁၂၅၀ ကို ကတ္တရာလမ်းနှင့် ကွန်ကရစ်လမ်းများ အဆင့်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ကာ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်က ရေဝပ်သည့်နေရာတွင် ကွန်ကရစ်လမ်းဖြင့် တွက်ချက်တင်ပြနိုင်ရေး ဌာနဆိုင်ရာတာဝန် ရှိသူများအား မှာကြားသည်။ထိုမှတစ်ဆင့် […]ဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်
ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ဒသမအကြိမ် စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲကျင်းပ
မြစ်ကြီးနား နိုဝင်ဘာ ၂၇ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ နှစ်စဉ်မပျက်ကြီးမှူး ကျင်းပသော ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၏ ဒသမအကြိမ်မြောက် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ပွဲတော် ကထိန်သင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲကို ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် ရေးညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မြစ်ကြီးနားမြို့ လယ်ကုန်းရပ်ကွက်ရှိ အောင် ချမ်းသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ကြရာ အခမ်းအနားကို နမောတဿ ၃ ကြိမ်ရွတ်ဆို ဘုရားကန်တော့ဖွင့်လှစ်သည်။ထို့နောက် ဝန်းသိုကျောင်းတိုက်ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဘဒ္ဒန္တကေတုမာလာ အမှူးပြုသော ဆရာတော်သံဃာတော်များထံမှ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာခက်အောင်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ် တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးတူးဂျာ၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ် အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ စသဖြင့် လူဦးရေ (၃၀)ခန့်တို့က ငါးပါးသီလခံယူဆောက်တည်ကြပြီး ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များက ပရိတ်တရားတော်များ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြကာ ကထိန်တရားတော်ကို […]ဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်
ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာခက်အောင် မြစ်ကြီးနားမြို့၌ ရေကူးပြေးလမ်း (၁၀)လမ်းပါ ရေကူးကန်နှင့် ဘက်စုံအားကစားရပ်ဝန်းတည်ဆောက်ရေး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး
မြစ်ကြီးနား ဒီဇင်ဘာ ၅ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာခက်အောင်သည် ကချင်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်မြစ်ကြီးနား မြို့၌ အားကစားကဏ္ဍပေါင်းစုံပါဝင်ပြီး ခေတ်မီသည့် အားကစားရပ်ဝန်းပေါ်ပေါက်လာစေရေး၊ နိုင်ငံ အတွင်း အကြီးဆုံးရေကူးကန်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းတို့အတွက် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ပြည်နယ် ဝန်ကြီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့သည် မြစ်ကြီးနားမြို့၊ သီတာရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ခရိုင်အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနပိုင်၊ ငြိမ်းချမ်းသာယာအားကစားကွင်း၏ (ကားကြီးကွင်းအဟောင်း)နေရာ၌ တည် ဆောက်သွားမည့် ရေကူးလမ်းပြေးလမ်း (၁၀)လမ်းပါ အလျား ၁၅၀ ပေ၊ အနံ ၇၅ ပေရှိ ရေကူးကန် အပါအဝင် သန့်စင်ခန်း၊ နားနေခန်းများ၊ ပွဲကြည့်စဉ်၊ ဆေးအဖွဲ့၊ ဒိုင်အဖွဲ့၊ ရုံးအဖွဲ့အခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးရေကူးကန် တည်ဆောက်မည့် စီမံကိန်းနှင့် အားကစားနည်းပေါင်း စုံပါဝင်ပြီး အားကစား ပစ္စည်းဆိုင်ခန်းများ၊ ဈေးဆိုင်ခန်းများပါဝင်သည့် ဘက်စုံအားကစားအားကစား […]ဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း (၇၃)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကျင်းပရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေး
မြစ်ကြီးနား ဒီဇင်ဘာ ၁၅(၇၃)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ နိုင်ငံတော် အလံတင်အခမ်းအနားနှင့် သဝဏ်လွှာဖတ်ပွဲ အခမ်းအနားများကို ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါအခြေအနေ ကြောင့် လူဦးရေအကန့်သတ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်သော်လည်း ယခင်နှစ်များကဲ့သို့ အားကစားပြိုင်ပွဲ၊ ပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲများနှင့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများကို ထည့်သွင်းကျင်းပတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း ယနေ့ နံနက် ပိုင်းတွင် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ မလိခခန်းမ၌ ကျင်းပသည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ ခက်အောင်က မှာကြားသည်။(၇၃)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားသည် နိုင်ငံတော်အခမ်းအနား ဖြစ်သည့်အတွက် မဖြစ်မနေကျင်းပပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါမှာ ပြည်နယ် အတွင်း တိုးပွားလာသည့် အခြေအနေရှိလာသည့်အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ လူဦးရေအကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ကျင်းပ ပြုလုပ်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောကြားသည်။ယင်းနောက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် […]ဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်
(၇၃)နှစ်မြောက် ကချင်ပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားပြုလုပ်ကျင်းပနိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေး
မြစ်ကြီးနား ဒီဇင်ဘာ ၂၃၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ (၁၀)ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် (၇၃)နှစ်မြောက် ကချင်ပြည်နယ်နေ့ အခမ်းအနားကို ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီ၏ ညွှန်ကြား ချက်များနှင့်အညီ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် ဦးစီးကော်မတီနှင့် ဆပ်ကော်မတီများ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ မလိခခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာခက်အောင်က (၇၃)နှစ်မြောက် ကချင် ပြည်နယ်နေ့အခမ်းအနားကို အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်းအတွင်း၌သာ လူဦးရေအကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ကျင်းပ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သဖြင့် ဆပ်ကော်မတီအသီးသီးအနေဖြင့် ပြည်နယ်နေ့အခမ်းအနား အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရေး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သွားရမည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းဆွေး နွေးကြရန်လိုကြောင်း မှာကြားသည်။ယင်းနောက် (၇၃)နှစ်မြောက် ကချင်ပြည်နယ်နေ့အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် ကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဇော်က ကချင်ပြည်နယ်နေ့အထိမ်း အမှတ်အခမ်းအနား […]ဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်
ပြည်နယ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါရင်ဆိုင်ခံစားနေရသော ပြည်သူများအတွက် အာဆီယံအပေါင်း(၃) အရေးပေါ်ဆန်ရိက္ခာ(APTERR)အစီအစဉ်အရ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှ လှူဒါန်းသော ဆန်ရိက္ခာ(၄၈)တန်အား ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် ဂုဏ်ထူး (၃)ဘာသာနှင့်အထက်ဂုဏ်ထူးရှင်ရှမ်းတိုင်းရင်းသား/သူများအားဂုဏ်ပြုဆု‌ပေးအပ်
မြစ်ကြီးနား ဒီဇင်ဘာ ၃၀ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင်ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ကြသည့် (၃) ဘာသာနှင့်အထက်ဂုဏ်ထူးရှင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ကျောင်းသား/သူများအား ဂုဏ်ပြုဆုပေးအပ်ချီးမြှင့်ပွဲကို ယနေ့ နံနက် (၁၀)နာရီတွင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဆမားဒူဝါဆင်ဝါးနော်ခန်းမ၌ ပြုလုပ်သည်။ဂုဏ်ပြုဆု‌ပေးပွဲတွင် ပြည်နယ်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဦးစိုင်းစိန်လင်းက ဂုဏ်ထူး ရ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားကျောင်းသား/သူများအတွက် ဂုဏ်ပြုအမှာစကားပြောကြားပြီး ရှမ်းမျိုးနွယ်စုစာပေ နှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်ပြုံးရည်က ထပ်ဆင့်ဂုဏ်ပြုအမှာစကားပြောကြားသည်။ယင်းနောက် ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် မြစ်ကြီးနားနှင့် ဝိုင်းမော်မြို့နယ်များအတွင်းရှိ (၃)ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် (၃)ဦး၊ (၄)ဘာသာနှင့် (၅)ဘာသာ(၁)ဦးစီနှင့် (၆) ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်(၂)ဦးတို့အား ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် လူမူရေးဝန်ကြီးဦးနေဝင်း၊ ဗမာတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်မြင့်(ခ)ဦးဒိတ်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုး‌ရေးရာဝန်ကြီးနှင့် ရှမ်းမျိုးနွယ်စု စာပေနှင့်ယာဉ်ကျေးမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတို့က ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာနှင့် ဂုဏ်ပြုဆုငွေများကို အသီးသီးပေး အပ်ခဲ့ကြသည်။၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ၌ […]ဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်
ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဗန်းမော်ခရိုင်
ဗန်းမော်မြို့နယ် ရွှေကူမြို့နယ် မိုးမောက်မြို့နယ် မံစီမြို့နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် ၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်အား Download ရယူ၍ ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။ Township_Cover_and_Content.2doc.pdf Distric__28-2-2017.pdfဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်
Weather forecast Myitkyina, Myanmar ▸
Visit Yesterday : 78
Total Visit : 21778
Server Time: 21-11-30
© 2021 ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ . All Rights Reserved. Proudly powered by Z.com Myanmar.